EU-da oo cunno qabateyn uga jawaabey sumeyntii hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny - Horseed Media • Somali News
EU-da oo cunno qabateyn uga jawaabey sumeyntii hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny
Hoggaamiyha Mucaaradka Ruushka ee la sumeeyey Alexei Navalny
Midowga Yurub wuxuu maanta oo Khamiis ah cunaqabateyn saaray lix muwaadin oo Ruush ah, oo dhammaantood xiriir la leh Aqalka Kremlin ee Ruushka looga taliyo, iyo Machadka Cilmi-baarista Gobolka ee mas’uulka ka ah burburinta hubka kiimikada. Cunaqabateynta ayaa timid kadib markii la sumeeyay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny.
Machadka cilmi baarista waxaa looga shakisan yahay inuu soo saaray neerotoxin uu Navalny ku sumoobay.
Liiska waxaa ku jira madaxa waaxda amniga Ruushka ee FSB, Aleksandr Bortnikov, iyo laba wasiir ku xigeen gaashaandhigga – Alexei Krivoruchko iyo Pavel Popov. FSB waxaa horay loo oran jiray KGB xiligii Midogw Sofiyeytiga.
Maaddaama Navalny la ilaalinaayey markii la sumeeyey, waxaa macquul ah in lagu soo qorshaha dilkiisa lagu gabagabeeyey in sunta la fulin karo oo keliya iyadoo lagaashanayo Laamaha Amniga Federaalka, Midowga Yurub oo qiil u samaynaya cunaqabateynta ayaa sidaas yiri.
War ka soo baxay EU
Kremlin-ka ayaa weli sii wada inuu diido ku lug lahaanshaha wuxuuna ugu yeeray cunaqabateynta tilmaam aan saaxiibtinimo lahayn oo dhaawici doonta xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo EU. Mar sii horeysay, Wasiirka Arimaha Dibada Ruushka Sergei Lavrov wuxuu ku hanjabay cunaqabateyn ka dhan ah Midowga Yurub in ay iyaguna soo rogayaan.
Kremlinku wali ma uusan soo bandhigin wax cunaqabateyn la taaban karo ah, laakiin wuxuu sheegay in Moscow ay qiimeyneyso xaalada sida ugu wanaagsan uguna macquulsan uga jawaabi doonto.